TA Partition Backup for Non-Root Xperia Phone | XPERIAN MYANMAR
TA Partition Backup for Non-Root Xperia Phone
Posted by Kyaw Zaww on 10/12/2016
Root Z2/Z3 (.575 & .291) firmwares without DOWNGRADING & BOOTLOADER UNLOCK
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Z3+, Z5 family နဲ့ X series တွေမှာ Root လုပ်ရင် Bootloader Unlock လုပ်ပြီးမှ Root ရပါတယ်။ Unlock လုပ်တော့ DRM Keys တွေပျက်တာပေါ့ DRM Fix ကနေ Fake key တွေထည့်လို့ရပေမယ့်လဲ နဂို Original လောက် ပြန်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ DRM Fix ဆိုတာ DRM key ရှိတယ်လို့ထင်ရအောင် trick လုပ်တဲ့ tweak တစ်ခုသာသာပါပဲ။ အရင်တုန်းတော့ Root မရှိရင် DRM Backup လုပ်လို့မရတော့ Choice မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
အခု Root လုပ်စရာမလိုပဲ DRM Key ပါတဲ့ TA partition (Trim Area Partition) ကို Backup လုပ်နိုင်တဲ့ tool ထွက်လာပါပြီ။ နာမည်ကျော် Linux kernel exploit တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dirty Cow exploit ကိုအသုံးပြုပြီး ထွက်လာတာပါ။
Sony မှန်သမျှအကုန်ရပါတယ်။ Z1 လိုဟိုးအရင်တုန်းကဖုန်းကနေ XZ အထိအကုန်ရပါတယ်။
PC မှာ ADB သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်
ပြီးတော့ Backup Tool လေးလိုပါတယ်
ဒေါင်းထားတဲ့ Zip ကို extract လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ Folder ထဲက BackupTA.cmd ဆိုတာလေးကို run ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ သူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုပ်သွားပြီး TA Backup img ဖိုင်လေးထွက်လာမှာပါ။ ဖိုင်နာမည်က TA နဲ့စပါတယ် ပြီးရင် Backup လုပ်တဲ့ဖုန်းရဲ့ model no. လာပါတယ် အဲ့နောက်မှာ Backup လုပ်တဲ့ရက်နဲ့အချိန်ပါပြီးတော့ .img နဲ့ဆုံးပါတယ်။
Backup file က size 2MB ဝန်းကျင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား size ဖြစ်နေရင်တော့ BackupTA.cmd ကိုနောက်တစ်ခါပြန် run ကြည့်ပါ။
30,539 total views, 72 views today
7 Give meaHeart, If you like that post!
DirtyCowDRM KeyNorootTA BackupXperia XXperia X CompactXperia XAXperia XA UltraXperia XZXperia Z3Xperia Z5Xperia Z5 CompactXperia Z5 Premium